Iibso Premium CBD budada & saliida soo saaraha sharciga
CBD waxay heshay kasbasho dhowaan, gaar ahaan dadka da'da yar. Qiyaastii boqolkiiba 20 dadka da'doodu u dhaxayso 18 sano iyo 29 sano waxay isticmaalaan nooc ka mid ah CBD, halka boqolkiiba 8 keliya dadka ka weyn 65 sano ay isticmaalaan CBD. Dadka da'da dhexe ayaa sidoo kale bilaabay inay la qabsadaan dadka da'da yar iyo ku dhawaad ​​30 boqolkiiba kooxdan da'da ah waxay ka qayb qaataan isticmaalka CBD, ha ahaato saliid, budo, ama foomka buufinta.
Qaar badan oo ka mid ah adeegsadayaashu waxay ku andacoodaan inay u adeegsadaan badeecadan awooddeeda ay ku yareynayaan xanuunka iyo inay yareeyaan astaamaha welwelka iyo xanuunnada kale ee niyadda u eg. Isticmaalka CBD ayaa sidoo kale cirka isku shareeray ka dib markii xaaladdii sharci ee marijuana la beddelay, taas oo aan la mid ahayn CBD. Si kastaba ha noqotee, sharciyeynta marijuana waxay gacan ka geysatay in laga saaro dhaleeceynta ku saabsan isticmaalkeeda iyo adeegsiga cannabinoids -ka laga helay geedka laftiisa.
Waa maxay CBD (Cannabidiol)?
Cannabidiol ama CBD waa phytocannabinoid oo laga soo qaatay dhirta xashiishadda waana mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee geedka marijuana, iyo geedka adeerka u ah, hemp oo iyaga siisa saameyno-yaraynta xanuunka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in cannabidiol laga soo saaro geedka hemp, oo ka tirsan qaybta dhirta xashiishadda laakiin aan ahayn waxa loogu yeero marijuana. Maaddaama laga soo saaro geedka hemp, ma laha astaamo nafsiyeed oo la macno ah inaysan awoodin inay dadka ka dhigto kuwo sarreeya.
Dhirta xashiishadda sativa, gaar ahaan, warshadda marijuana waxay awood u leedahay inay dadka dareensiiso heer sare iyada oo loo marayo saamaynta Delta-9-tetrahydrocannabinol ama THC, phytocannabinoid kale oo laga soo qaatay dhirta xashiishadda. Marijuana waxay leedahay uruurinta THC oo ka sarreysa dhirta kale ee xashiishadda sida hemp taas oo ah sababta ay ugu leedahay guryaha ugu nafsadda badan dhammaan dhirta kale. CBD waxaa laga soo qaatay geedka hemp oo hodan ku ah CBD laakiin waxaa ku jira THC aad u yar, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaarka ugu fiican dadka jeclaan lahaa inay la kulmaan faa'iidooyinka warshadda Cannabis sativa iyada oo aan lahayn saamaynta nafsiyeed.
Saamaynta CBD iyo THC waa isku mid aragti ahaan in labaduba ay saameeyaan kiimikooyinka kala duwan ama dareemayaasha gudbiya maskaxda laakiin xarun kasta oo cannabinoid ah waxay saamaysaa kiimikooyin kala duwan waxayna ku leedahay saamayn kala duwan, sidaa darteed waxay soo saartaa natiijooyin aad u kala duwan.
Cannabidiol waxaa markii hore laga helay 1940 isagoo ah phytocannabinoid aan nafsiyan ahayn ee dhirta xashiishadda laakiin ma ahayn ilaa 2018 in USA ay ka saartay, oo ay weheliso warshaddii waalidkeed, hemp, Liiska Maaddooyinka la Xakameeyay. Si kastaba ha noqotee, wali waa sharci darro in dadku u isticmaalaan budada cannabidiol, saliidaha CBD, ama alaabada kale ee CBD qaabkooda saafiga ah ama qaab kasta oo ah daaweyn suuragal ah ama qayb ka ah kaabista cuntada.
Daawooyinka CBD waxaa oggolaaday Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ama FDA ee Mareykanka ee loogu talagalay daaweynta qalalka iyo qalalka. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa arrimo caafimaad oo kale si kastaba ha ahaatee, weli waa in la helaa oggolaanshaha maamulka caafimaadka ee FDA iyo waddamada kale ka hor inta aysan noqon heer daryeel.
Sidee bay CBD ugu shaqaysaa jirka?
Xaqiiqdii, xirfadlayaashu waxay ka hadlayeen mawduuca "sidee buu CBD ugu shaqeeyaa jirka bini'aadamka" sannado badan. Waxay u muuqataa in dood macquul ah la helay. Saynisyahannadu waxay rumeysan yihiin in CBD ay si dadban ugu shaqeyso nidaamka endocannabinoid si ay uga faa'iideysato faa'iidooyinkeeda. Kahor intaanan fahmin sida CBD ay ugu shaqeyso jirkeena, waa inaan marka hore fahanno waxa uu yahay nidaamka endocannabinoid iyo sidee ugu jirtaa jirkeena?
Waa maxay Nidaamka Endocannabinoid (ECS)?
"Cannabinoid" waxay ka timaadaa "cannabis," iyo "endo" waxay u gaaban tahay "endogenous," taas oo macnaheedu yahay in si dabiici ah looga soo saaro jidhkaaga dhexdiisa. Markaa "endocannabinoid" micnaheedu waa walxaha cannabis oo kale ah oo si dabiici ah uga dhaca gudaha.
ECS lafteedu waxay ka kooban tahay saddex qaybood:
② Garsoorayaasha (CB1, CB2) ee habdhiska neerfaha iyo jirkaaga ee ay endocannabinoids iyo cannabinoids ku xidhmaan. (Soo-dhoweeyeyaasha CB1 waxay joogaan jirka oo dhan, gaar ahaan maskaxda. . Soo -dhoweeyeyaasha CB2 ayaa aad ugu badan nidaamka difaaca. Waxay saameeyaan barar iyo xanuun)
Enzymes kaas oo gacan ka geysanaya burburinta endocannabinoids iyo cannabinoids
ECS ma aha oo kaliya qayb dabiici ah oo ka mid ah jidhkeenna, laakiin sidoo kale waa mid aad muhiim u ah. Asalka ugu sarreeya, nidaamka endocannabinoid waa shabakad aad u weyn oo soo -dhoweeyeyaasha cannabinoid ah oo ku faafa jirka. Nidaamka endocannabinoid -ka bini -aadamka wuxuu sii daayaa cannabinoids oo la falgalaya soo -dhoweeyeyaasha laga helo dhammaan unugyada unugyada jidhkeenna. Waxa kale oo aad qaadan kartaa phyto-cannabinoids (CBD) marka lagu daro xeryahooda jirkaagu soo saaro si ay gacan uga geystaan ​​kor u qaadista nidaamkan. Doorka nidaamka endocannabinoid waa inuu dheelitirka u keeno unugyadayada, oo ay ku jiraan wadnaha, dheefshiidka, endocrine, difaaca, neerfayaasha, iyo hababka taranka. Marka la soo koobo, waxay ka shaqeyneysaa inay dhexdhexaad kaa dhigto. Dhexdhexaad micnaheedu waa waxyaabo kala duwan meelo kala duwan oo jidhkaaga ah, taas oo laga yaabo inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan xarunta - waxay saamayn kala duwan ku yeelan kartaa soo -dhoweeyeyaasha kala duwan ee jirkaaga.
CBD, taa bedelkeeda, ma aha mid nafsaani ah, kuma xakameyn doonto adiga oo kaa dhigi doonta mid balwad leh ka dib markii aad isticmaashay alaabooyinka CBD ama CBD. CBD waxba kama beddeleyso xaaladda maskaxeed ee qofka marka ay isticmaalayaan. Si kastaba ha noqotee, waxay soo saari kartaa isbeddellada muhiimka ah ee jirka, waxayna muujineysaa faa'iidooyin caafimaad oo muhiim ah.
Saynisyahannadu mar bay rumaysteen in CBD ay ku dheggan tahay soo -dhoweeyeyaasha CB2, laakiin daraasado cusub ayaa tilmaamaya in CBD aysan si toos ah ugu xirnayn labada soo -dhoweeye. Taa bedelkeeda, waxaa la rumeysan yahay in CBD ay si dadban u saameyso nidaamka endocannabinoid. Saamaynta aan tooska ahayn ee CBD ee Nidaamka Endocannabinoid Marka qof qaato CBD, dhismuhu wuxuu galayaa nidaamkaaga iyo nidaamka endocannabinoid (ECS). Tan iyo markii cannabidiol la ogaaday inuusan lahayn xiriir gaar ah oo ku xidhan, saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in faa'iidooyinka dawaynta ee CBD lagu abuuray tallaabo dadban.
CBD waxay xakameysaa dufanka acid amide hydrolase (FAAH), taas oo jabisa anandamide oo daciifisa. CBD waxay daciifisaa FAAH, taasoo horseed u ah kordhinta anandamide. Anandamide waxaa loo tixgeliyaa “molecule bliss” wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa jiilka raaxada iyo dhiirigelinta. Feejignaanta sii kordheysa ee anandamide waxay saameyn wanaagsan ku yeelan kartaa nidaamka endocannabinoid.
CBD waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa borotiinka ku xiran borotiinka (FABP). Borotiinada FABP waxay ku xidhaan anandamide waxayna u qaadaan insaymka banaanka synapse-ka si ay u kala jabaan oo ay u falgalaan FAAH. CBD waxay saameyn ku yeelaneysaa habka gaadiidka ee FABP si anandamide ka yar loo shiido, mar labaadna waxay keentaa isku-uruurinta sare ee anandamide.
Ugu dambeyntiina, CBD waxay isku xirtaa soo-dhoweeyeyaasha G-protein ee loo yaqaan TRPV-1. Qabsadayaasha TRVP-1 waxay ku lug leeyihiin nidaaminta xanuunka, heerkulka jirka, iyo caabuqa. Waxay ku xiran tahay xiritaankaas saynisyahannadu waxay rumaysan yihiin in CBD ay ka caawiso caabuq iyo xanuun joojiye.
Erey ahaan, Nidaamka endocannabinoid wuxuu caawiyaa jirka inuu kusii jiro homeostasis. Marka la nuugo, Cannabidiol waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta awoodda jidhkeennu si habsami leh u shaqaynayo. CBD waxay la falgashaa cannabinoid, dopamine, opioid iyo serotonin reseptors ee jirkeena, ka dibna waxay hagaajisaa shaqooyin badan oo jirkeena ah.
Faa'iidooyinka Caafimaadka ee CBD
CBD caankeeda iyo caannimadeeda waxaa loo aanayn karaa faa'iidooyinka kala duwan ee ay ku leedahay jirka bini'aadamka, kuwaas oo intooda badan aan si fiican loo baarin oo keliya laakiin natiijada daraasadahaas, oo ay taageerayaan caddeyn cilmiyeed. Kahor sharciyeynta iyo adeegsiga baahsan ee xarunta, dhowr nooc oo cilmi baaris ah ayaa la sameeyay si aan loo baran oo keliya faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka CBD laakiin sidoo kale si loo falanqeeyo loona qiimeeyo amniga iyo sumowga suurtagalka ah ee xarunta.
Faa'iidooyinka badan ee CBD ayaa hoos ku xusan, oo ay la socdaan daraasado kala duwan oo caddeeyay faa'iidooyinkaas.
Management Maareynta Xanuunka iyo Relief
Dadka badankood waxay jecel yihiin inay u isticmaalaan CBD faa'iidadan gaar ahaan. Waxaa jira diiwaanno marijuana loo isticmaalay xanuun -baabi'iye, oo soo noqonaya ilaa 2900 BC. Dhirta xashiishadda waxay u dhaqmi kartaa xannuun -joojiyeyaal waxayna yareyn kartaa noocyada kala duwan ee xanuunka taasoo ka dhalatay ficilkooda ku saabsan soo -dhoweeyaha cannabinoid ee jirka.
Jirka bini -aadamka wuxuu leeyahay nidaam endocannabinoid ama ECS si uu uga caawiyo dhowr hawlood oo muhiim ah sida hurdada, rabitaanka cuntada, iyo jawaab -celinta difaaca. ECS ayaa mas'uul ka ah sii deynta cannabinoids -ka daba -galka ah ee ku dhaqma soo -dhoweeyaha cannabinoid oo yareeya xanuunka, kor u qaada jawaab -celinta difaaca, kiciya gaajada iyo wareegga hurdada. CBD iyo THC labaduba waa cannabinoids oo marka afka ama dusha laga qaato, la falgalaan oo ku xidhmaan soo -dhoweeyeyaasha cannabinoid. Maaddaama cannabinoids -kan dibedda ah ay la mid yihiin cannabinoids -ka soo -baxa, waxay soo saari karaan natiijooyin la mid ah kuwa endogenous, in kasta oo natiijooyinkoodu laga yaabo inay xoogaa buunbuunin yihiin.
Sannadkii 2018, cilmi-baarayaashu waxay sameeyeen falanqayn maadada dhammaan suugaanta la daabacay illaa 2017 faa'iidooyinka isticmaalka cannabidiol ee bukaannada qaba xanuunka neuropathic ee ka dhasha cudurrada halista ah. Shan iyo toban ka mid ah siddeed iyo tobankii daraasadood ee ku lug lahaa falanqaynta maadadaas waxay ogaadeen in bukaannada badankood laga nastay xanuunkooda kadib markii la isku daray 27mg THC iyo 25 mg CBD.
Waxaa intaa dheer, dhammaan daraasadaha waxay ogaadeen in dhibaatooyinka ugu daran ee isku -dhafkan ay ahaayeen lallabbo, af qalalan, iyo matag. Waxyeellooyinkaan kuma jirin bukaan -socod kasta oo kuwa ay saameysayna ma yeelan fal -celin aad u daran oo ku filan. Tani waxay horseeday cilmi-baarayaashu inay soo gabagabeeyaan in isticmaalka THC iyo CBD, ay si dhexdhexaad ah u daaweyn karaan xanuunka neuropathic oo si wanaagsan loogu dulqaadan karo oo ay aad u yar tahay halista waxyeellooyinka xun.
Waxaa jira noocyo badan oo cilmi -baaris oo kala duwan oo la sameeyay si loo taageero isticmaalka CBD xanuun -joojiye ahaan. Mid ka mid ah cilmi-baarisyada noocan oo kale ah ayaa diiradda saarey adeegsiga CBD ee astaamaha immunomodulatory iyo anti-bararka. Daraasadda Talyaanigu waxaa lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka iyo cilmi -baarayaashu daraasaddan waxay isku dayeen inay hagaajiyaan xanuunka bararka joogtada ah ee jiirka iyadoo la adeegsanayo CBD afka ah. Waxay ogaadeen in markii 20 mg/kg ee CBD la siiyay jiirka oo leh xanuun barar joogto ah, jiirku wuxuu muujiyey hoos u dhac weyn oo ku yimid xanuunka. Sidoo kale, waxay sidoo kale daraasad ku sameeyeen saamaynta CBD ee xanuunka neuropathic ee jiirka oo leh dhaawac neerfaha nafaqada ah in kasta oo ay yareyn karto xanuunka, haddana waxaa la ogaaday in CBD ay aad ugu faa'iido badan tahay gobollada daba -dheeraada ee xanuunka.
Dad badan ayaa u qaata saliidaha CBD ama buufin ama kiniinno xanuun joogto ah, taasina waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee caanka ah CBD iyo marijuana. Waxa kale oo ay ahayd faa'iidadan, kuwa kale oo badan, oo horseeday adeegsiga baahsan ee CBD iyo marijuana taasoo horseedday sharciyeynta labada xeryood iyo ka saarista CBD Liiska Walxaha La Xakameeyay.
♦ Daaweynta Qallalka iyo Xanuunnada kale ee Suuxdinta
Suuxdintu inta badan waxay la xiriirtaa qallalka laakiin dhowr cudur oo kale ayaa soo saari kara qalal sida Dravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome, iyo wixii la mid ah. Qaabka saafiga ah ee alaabada CBD ayaa loo maleeyay inay leeyihiin saamaynta ka hortagga suuxdinta ama ka-hortagga suuxdinta laakiin dhowaan bay ahayd inay jireen caddayn la taaban karo oo saynis ah oo taageeray mala-awaalkan.
Markii hore, waxaa jiray muranno dhowr ah oo ku saabsan adeegsiga CBD gaar ahaan daaweynta qallalka iyo xanuunnada kale ee suuxdinta. Tani badanaa waxay ahayd sababta oo ah in kasta oo CBD ay tahay ka-hortag, xaaladaha qaarkood ee ba'an, waxay u dhaqmi kartaa sidii qof damqasho leh. Si kastaba ha noqotee, ka dib laba indhoole oo kala duwan, tijaabooyin caafimaad oo la kala soocay ayaa la sameeyay, waxaa la ogaaday inaysan taasi ahayn kiiska. CBD iyo THC labaduba waxaa la ogaaday inay u badan yihiin kuwa ka -hortagga dabeecadda.
Iyada oo ay ugu wacan tahay daraasado dhowr ah, waxaa la ogaaday in budo CBD saafi ah iyo saliidaha hemp CBD, oo ka mid ah alaabooyinka kale ee CBD, canareanage iyo daaweynta qalal ay sababeen suuxdin, Dravet Syndrome, Tuberous Sclerosis Syndrome, iyo Lennox-Gastaut Syndrome. Soo-helitaankan ka dib, Daawooyinka GW waxay soo saareen dawo ay ku jirto diirad sareedo CBD ah oo la yiraahdo Epidiolex kaas oo xitaa helay oggolaanshaha FDA si loogu isticmaalo daawo ka-hortagga suuxdinta.
Si kastaba ha noqotee, waxaa mudan in la xuso in wali aan la garanayn haddii alaabada CBD laga soo iibiyay soo -saareyaasha go'doominta CBD ee kaladuwan ay waxtar u leeyihiin sida Epidiolex ee maaraynta astaamaha cuduradan suuxdin. Tani waxay si gaar ah u tahay maxaa yeelay ma aha dhammaan soosaarayaasha budada CBD iyo alaab -qeybiyeyaasha budada CBD inay bixiyaan budo iyo badeecooyin CBD saafiya ah, laakiin waa badeecooyin wasakhaysan oo aan u urursanayn, sidaa darteedna, aan waxtar lahayn. Waxaa gabi ahaanba muhiim ah in kaliya laga iibsado iibiyeyaasha la xaqiijiyay ee iibiya alaabada CBD ee tayo sare leh.
Cilmi-baadhayaashu waxay hadda isku dayayaan inay qiimeeyaan adeegsiga CBD iyo THC si wada jir ah ama adeegsiga CBD oo keliya si loo maareeyo loona daweeyo suuxdinta u adkaysta daaweynta, maadaama ay khatar weyn ku yihiin nolosha bukaannada oo inta badan mas'uul ka ah tayada nolosha oo aad hoos ugu dhacday.
Dalbo CBD Powder & Saliida Hada!
Yaree Werwerka iyo Niyadjabka
Isticmaalka cannabidiol ayaa lagu muujiyey inay leedahay saameyn walaac iyo ka-hortagga niyad-jabka dhowr nooc oo xayawaan ah. Daraasad reer Brazil ah oo lagu sameeyay jiirarka, waxaa lagu ogaaday in CBD ay leedahay saameyn la mid ah tan imipramine, oo ah ka-hortagga niyad-jabka ee hippocampus ee jiirarka niyadjabsan. Daraasadda waxaa loo sameeyay si loo qiimeeyo saamaynta cannabidiol ee niyad -jabka iyo in la qiimeeyo sida CBD u soo saari karto natiijooyinkaas.
Waxay ogaadeen cilmi-baarayaashu in CBD ay ku dhaqaaqday soo-dhoweeyeyaasha serotonin, gaar ahaan kuwa qaata 5HT-1A si ay u soo saaraan saamaynta ka-hortagga niyad-jabka guud ahaan. Waxaa sidoo kale la ogaaday in, si CBD u noqoto mid wax ku ool ah, firfircoonaanta BDNF ama qodobka neerfaha laga soo qaatay Maskaxda ayaa lagama maarmaan ahayd.
Si kastaba ha noqotee, daraasaddan ayaa diiradda saareysa saameynta CBD ee moodooyinka xayawaanka isla natiijooyinkaasna lagama maarmaan ma aha in lagu soo saaro aadanaha sidoo kale. Tani waa sababta daraasad loogu sameeyay 57 caafimaad qaba, ragga qaangaarka ah si loo qiimeeyo haddii CBD ay leedahay walwal iyo ka-hortagga niyad-jabka bini-aadamka sidoo kale. Tijaabadan indho-indhaynta ah ee reer Brazil ee tijaabada caafimaad ee la kala soocay, adeegsiga CBD ayaa lagu qiimeeyay placebo si loo qiimeeyo saamaynta waxaana la ogaaday in saamaynta CBD ee xayawaanku ay sidoo kale ku dayanayso aadanaha. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaalka CBD uu awood u leeyahay inuu yareeyo walaaca iyo niyad -jabka bini -aadamka.
Saliidaha iyo budada Cannabidiol ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay door weyn ka ciyaaraan daaweynta iyo maareynta welwelka carruurta iyo jirrooyinka PTSD, sida lagu taliyay warbixin kiis oo ay daabaceen dhakhaatiirta Jaamacadda Colorado.
♦ Maaree Calaamadaha La Xiriira Kansarka
Daaweynta kansarka iyo kansarka badanaa waxay soo saaraan calaamado aan gaar ahayn sida lallabbo, matag, iyo xanuun. Astaamahani waa ay adag tahay in la maareeyo gaar ahaan marka ay ku soo noqnoqdaan wareeg kasta oo daaweynta kansarka ah. Si kastaba ha noqotee, daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in astaamaha la xiriira kansarka sida kuwa kor ku xusan ay maamuli karaan CBD ama isku darka CBD iyo THC.
Daraasad lagu sameeyay Boqortooyada Midowday oo ku saabsan bukaannada 177 ayaa la sameeyay si loo qiimeeyo badbaadada iyo waxtarka CBD iyo THC isku-darka sida xanuunka aan-lahayn ee bukaannada qaba xanuunka kansarka la xiriira. Natiijooyinka asaasiga ah ee daraasaddu waxay muujiyeen saamayn rajo leh maaddaama inta badan bukaannada qaadanaya isku -darka CBD iyo THC ay soo sheegeen hoos u dhac weyn oo ku yimid xanuunka, ku dhawaad ​​laba jeer ka badan kooxda placebo. Tani waxay muujineysaa waxtarka labada cannabinoids ee daaweynta iyo maareynta xanuunka bukaanka kansarka.
Intaa waxaa dheer, cilmi -baarayaasha isla daraasaddan waxaa lagu go'aamiyey in la helo dulqaadka daaweyntan cusub ee suurtagalka ah ee bukaannada kansarka maaddaama badi daaweynta kansarku ay leeyihiin dhowr waxyeelo oo la xiriira iyaga. Waxaa la ogaaday in CBD iyo THC ay si wanaagsan ugu dulqaateen bukaannada isla markaana isku-darka ayaa si dhib yar u soo saaray waxyeello kasta oo mudan in la xuso.
Dawaynta kimikalku waa dawada ugu badan ee ku dhowaad dhammaan noocyada kansarka laakiin si fiican uma dulqaato jidhka bini'aadamka waxayna wax u dhimi kartaa tayada caafimaadka. Mid ka mid ah waxyeellooyinka ugu waaweyn ee ka jira ku dhawaad ​​dhammaan bukaannada qaata kiimoteraabiga waa lallabbo-matag iyo matag-kiimiko-ku-kiciyay ama CINV. In kasta oo ay jiraan dawooyin badan oo antiemetic -ka jira, qaarkoodna si gaar ah loogu talagalay CINV, had iyo jeer waxtar ma leh. Si kastaba ha noqotee, cilmi -baaris lagu sameeyay Barcelona ayaa lagu ogaaday in isticmaalka CBD ay gacan ka geysan karto yareynta bukaannada qaba CINV oo leh waxtar ka sarreeya dawooyinka antiemetic -ka ee loogu talagalay gaar ahaan CINV.
Proper Guryaha neeroprotective
CBD waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah oo ka dhan ah jirrooyinka dhimirka halkaas oo ay bartilmaameedsato soo -dhoweeyeyaasha neurotransmitter -ka kala duwan iyo soo -dhoweeyeyaasha cannabinoid si ay u soo saaraan saameyntan wanaagsan. Daawada CBD, Epidiolex ayaa sidoo kale ansixisay FDA iyo mas'uuliyiinta caafimaadka adduunka oo dhan si loogu daweeyo qalal ka dhasha Qallalka iyo xanuunnada kale ee suuxdinta.
Marka la eego faa'iidooyinkan, dhowr nooc oo cilmi baaris ah ayaa la sameeyay si loo barto saamaynta CBD ee cudurrada kale ee neerfaha, sida Alzheimer's iyo Multiple Sclerosis.
Daraasad lagu sameeyay Jarmalka ayaa baratay saamaynta Sativex, oro-mucosal CBD ku buufisay murqaha muruqa ee lagu arkay bukaanka qaba sclerosis badan. Bukaanadan waxay la ildaran yihiin muruqyada dawada u adkaysta iyo buufinta CBD, bukaannadan, waxaa loo isticmaalay sidii daaweyn ku-daweyn ah dawaynta jirta.
Waxaa la ogaaday in bukaan -socodka sclerosis -ka badan ay u dulqaateen Sativex oo aysan lahayn fal -celin xun oo ka dhalatay isticmaalka Sativex. Intaa waxaa dheer, adeegsadayaasha Sativex waxay soo sheegeen hoos -u -dhac weyn oo ku yimid murqaha iyo xanuunka, taas oo keentay in cilmi -baarayaashu ay ku taliyaan adeegsiga saliidaha CBD, budo, iyo buufin loogu talagalay bukaannada la il -daran muruqyada iyo murqaha.
Daraasad kale oo la sameeyay si loo barto saamaynta CBD ee bukaannada Alzheimers ayaa sidoo kale muujisay natiijooyin rajo leh, sidaa darteed waxay caddaynaysaa in CBD leedahay astaamaha neerfaha. Waqtigan xaadirka ah, cudurka Alzheimers waa jirro aan la daweyn karin oo ah cudurka neerfaha oo mar uun jira, lama hormarin karo horumarka ama dib looma celin karo. Si kastaba ha noqotee, saameynta vitro ee CBD ee unugyada maskaxda ayaa muujineysa sawir cusub waxayna rajo siineysaa bukaannada qaba cudurka Alzheimers.
Horumarinta aragtidan oo lagu sameeyay saamaynta faytamiinka ee CBD, daraasado ayaa lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka si loo arko haddii cudurka Alzheimers lagu beddeli karo daaweyn dagaal leh oo lala yeesho CBD. Jiirarka leh cillado garasho iyo gliosis, oo ah nooc ka mid ah samayska maskaxda, oo ka dhalatay Alzheimer ayaa la siiyay CBD oo qayb ka ah daraasaddan. Waxaa la ogaaday in CBD ay yareysay sameynta nabarka maskaxda waxayna keentay neurogenesis ama horumarinta unugyada maskaxda cusub si loola dagaallamo luminta unugyada sababtuna tahay gliosis firfircoon. Waxaa intaa dheer, CBD waxaa la ogaaday inay beddesho cilladaha garasho ee lagu arkay moodooyinka jiirka, sidaa darteed waxay rajo ka muujineysaa in cudurka Alzheimers uu noqon karo mid la beddeli karo oo la daaweyn karo, mustaqbalka.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in inta badan natiijooyinkan lagu soo saaray qaabab xayawaan oo natiijooyinkan waa in lagu soo celiyaa tijaabooyinka kiliinikada maadooyinka aadanaha ka hor inta isticmaalka CBD uusan noqonin heerka daryeelka.
Management Maareynta iyo Daaweynta Finanka
CBD waxay heshay xanaaq iyada oo ay ugu wacan tahay xannuunkeeda, anxiolytic, iyo guryaha ka-hortagga bararka. Waa astaamaha ka-hortagga bararka cannabinoid-kan oo horseeday in loo isticmaalo daaweynta ka-hortagga finanka. Finanka waxaa la rumeysan yahay inay ka dhasheen caabuq, bakteeriya, iyo soosaarka sebum -ka oo xad -dhaaf ah. Daraasad la sameeyay si loo qiimeeyo hantidaan saliidaha CBD, waxaa la ogaaday in CBD ay ka hortagto barar ka dibna horumarinta cystic, finanka bararka iyadoo la xakameynayo dheecaanka cytokines-ka bararka ee pro-acne. Intaa waxaa dheer, daraasaddan ayaa lagu ogaaday in CBD ay wax ka beddeli karto heerarka sebum ee maqaarka iyada oo la beegsanayo wax soo saarkeeda isla markaana si toos ah loo yareeyo.
CBD hadda waxaa loo adeegsadaa dhowr alaab oo daryeelka maqaarka ah iyo wakiilada jirka la mariyo oo lagu xayeysiiyo inay yihiin waxyaabaha ka hortaga finanka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la helo badeecooyin ay ku jiraan nooc ka mid ah farsamooyinka si ay u caawiso in badeecada la nuugo maqaarka bini'aadamka. Tani waa si loo hubiyo in uu maqaarka galo oo uu yareeyo bararka gudaha.
Proper Guryaha lidka ku ah maskaxda
CBD waxaa si weyn loogu adeegsadaa awooddeeda maareynta cudurrada neerfaha, taas oo ah sababta dhowr nooc oo kala duwan oo cilmi baaris ah loogu sameynayo saameynta kale ee dhimirka ee CBD. Inta badan daraasadahaasi waxay muujiyeen jawaab togan.
Isticmaalka xashiishadda ayaa la rumeysan yahay inay hadda keento kororka dhimirka ee xaqiiqada looga baxo, oo ah cudur neerfayaasha dabadheeraad ah oo leh astaamo u eg nafsi. Daraasado cusub ayaa mala -awaalay in adeegsiga CBD laga yaabo inay faa'iido u leedahay maareynta iyo ka hortagga cudurka dhimirka ee lagu arko cudurka dhimirka ee xaqiiqada looga baxo, kaas oo ka dhasha isticmaalka xashiishadda, iyo kan ku soo kordha saameynta hidde -wadayaasha, iyada oo aan ku lug yeelan xashiishadda. Waxay kaloo beddeli kartaa cudurka dhimirka ee mararka qaarkood lagu arko maamulka ba'an ee THC.
Natiijooyinkani waxay caddeynayaan in CBD ay leedahay astaamo dhimirka oo u baahan in la sii qiimeeyo maaddaama faa'iidooyinkani ay qiimo weyn ugu yeelan karaan daawada.
♦ Daaweynta iyo Maareynta Dhibaatada Xadgudubka Maandooriyaha
Xanuunada qabatinka waxaa loo soo saaray ficilka daawooyinka ee wareegyada neuronal -ka, taasoo dadka ka dhigaysa inay damcaan kuna tiirsanaadaan daawooyinkan. Dib -u -eegista suugaanta ee ay sameeyeen cilmi -baarayaashu si ay u qiimeeyaan adeegsiga CBD oo ah daaweyn suuragal ah oo ah xanuunnada qabatinka leh, waxaa la ogaaday in CBD laga yaabo inay awood u yeelato inay la falgasho wareegyadan neerfayaasha ah oo ay hor istaagto, taasoo dhalisay hoos -u -dhac iyo ku -tiirsanaanta alaabooyinkan.
Dib -u -eegista suugaanta waxaa ku jiray daraasado 14 ah, oo 9 ka mid ah lagu sameeyay moodooyinka xoolaha, gaar ahaan jiirarka. CBD waxaa la ogaaday inay si gaar ah faa'iido ugu leedahay ka -hortagga opioids, kokain, maskax -mareenka, sigaarka, iyo qabatinka xashiishadda. Si kastaba ha noqotee, kuwani waxay ahaayeen natiijooyin hordhac ah oo natiijooyin dheeri ah weli lama daabicin kahor inta natiijooyinka si ballaaran loo aqbali karo.
Ka -hortagga sonkorowga
Sonkorowgu waa dhibaato aad u weyn oo saameysa qayb weyn oo ka mid ah dadweynaha adduunka. Daraasad dhowaan la sameeyay oo lagu sameeyay moodooyinka xayawaanka ayaa lagu ogaaday in isticmaalka CBD ee jiirarka aan buurnayn ay si weyn hoos ugu dhigi karto dhacdooyinka cudurka macaanka. Daraasaddan, inta u dhexeysa kooxda dhex dhexaadinta iyo kooxda placebo, waxaa si aad ah hoos ugu dhacay dhacdooyinka cudurka macaanka laga bilaabo boqolkiiba 86 illaa boqolkiiba 30.
Intaa waxaa dheer, daraasaddan ayaa lagu ogaaday in isticmaalka CBD ay sababi karto hoos u dhac ku yimaadda cudurka macaanka taasoo ka dhalata guryaha ka-hortagga bararka iyo saamaynta immunomodulatory ee cannabinoid. Isticmaalka CBD ee qaababka xayawaankan ayaa sidoo kale keentay dib u dhac ku yimid insulitis wax burburiya, mid ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah ee mas'uul ka ah dhimista insulinta ee sonkorowga.
CBD waa isku -darka si ballaaran loo heli karo oo sidoo kale lagu heli karo qaabab kala duwan si loo fududeeyo geedi socodka dalabka oo dhan xitaa kuwa isticmaala. Siyaabaha ugu badan ee loo adeegsado ama loo isticmaalo CBD waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
Cream -yada Maaddada CBD
Wakiiladan mawduucan leh waxaa ku jira CBD waxaana loo isticmaalaa maaraynta xanuunka, bararka, bararka, cuncunka maqaarka, iyo xitaa finanka. Kiriimyada la mariyo ee CBD waa in loo adeegsadaa sida badeecada kale ee daryeelka maqaarka oo lagu daboolo dhinaca maqaarka ee u baahan daaweynta.
Markaad iibsanayso maaddooyinka CBD iyo kiriimyada, waxaa muhiim ah in la iibsado badeecadda leh nooc ka mid ah nanotechnology ama micellization taas oo u oggolaanaysa maaddooyinka wakiilka maaddooyinka, sida CBD, in maqaarka la nuugo oo laga daaweeyo gudaha. Iyadoo aan la helin hababkan nuugista, wakiillada maaddada CBD-ku jira waxay joogi doonaan oogada oo ma soo saari doonaan saamayn waxtar leh haba yaraatee.
CBD marka la neefsado iyada oo loo marayo uumiga ayaa u oggolaanaysa CBD inay si dhakhso leh ugu nuugto jirka, oo ay u soo saarto dheefaha si ka dhakhso badan qaab kasta oo kale. Maaddaama lagu neefsado sambabbada ka dibna u gudubto dhiigga, CBD oo ku jirta vape waxay ka gudubtaa dheef-shiid kiimikaadka ugu horreeya kaasoo inta badan qaata oo ka hortaga ficilka degdegga ah ee CBD. Taasi maahan kiimikooyinka CBD habkan adeegsiga CBD wuxuu si gaar ah caan ugu yahay dadka da'da yar. In kasta oo CBD ay leedahay ficil deg -deg ah oo ficil ah marka loo adeegsado qaab vape ah, waxay sidoo kale leedahay dheef -shiid kiimikaad degdeg ah waxayna ku jirtaa dhiigga illaa 10 daqiiqo, taasoo la micno ah in wax -ku -oolnimada dhammaan uumiga CBD ay socoto 10 daqiiqo.
Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in uumiyadu aysan ahayn hab caafimaad leh oo loo adeegsado CBD ama shey kasta oo kale. Uumiga ayaa loo tixgeliyaa inuu ka caafimaad badan yahay sigaarka laakiin weli waa caafimaad darro wuxuuna u baahan yahay in laga fogaado, gaar ahaan maaddaama noocyada kale ee CBD ay diyaar yihiin oo la heli karo.
Cap Kaabsoosha iyo Kiniiniyada CBD
Qaabkan CBD waa qaabka ugu nidaamsan ee qaadashada CBD wuxuuna u oggolaanayaa adeegsadayaasha inay ku cunaan cannabidiol qiyaaso kala duwan oo gaar ah, oo ku saleysan dookhooda iyo baahidooda. Qiyaasta caadiga ah ee kaabsoosha iyo kiniiniyada CBD waa inta u dhaxaysa 5 mg iyo 25 mg.
Con Xoojinta CBD
CBD waxay xooga saareysaa, sida magacu tilmaamayo, waxaa ku jira qaab xoog leh oo CBD ah. Celcelis ahaan, alaabadani waxay la yimaadaan codsade waxayna boqol laab ka xoog badan yihiin badeecadaha iyo qaababka kale ee CBD. Waxaa lagu heli karaa qaab budo ah, badeecadani waa in afka lagu hayaa xoogaa ka hor inta aan la liqin si loogu oggolaado CBD inay si hoose u nuugto sidoo kale iyada oo loo marayo dheef-shiid kiimikaadka ugu horreeya ka dib marka la liqo.
O Saliidaha CBD iyo Tinctures
CBD Saliidaha iyo tinctures -ka ayaa sidoo kale ku jira diirad sareysa CBD oo inta badan u dhexeysa 100 mg ilaa 1500 mg. Maaddaama kuwan sidoo kale afka laga cuno, waxaa muhiim ah in la hubiyo qiyaasta oo laga fogaado xad -dhaafka maxaa yeelay taasi waxay kordhin kartaa halista saameynta xun waxayna yareyn kartaa saamaynta faa'iidada leh ee CBD.
Qaabkan CBD waa nooc cusub oo codsi ah, marka la barbar dhigo foomamka kale, wuxuu leeyahay uruurinta ugu hooseysa ee CBD. Waxyaabaha caadiga ah ee CBD ee buufintaan waxay u dhexeeyaan 1 mg ilaa 3 mg buufin kasta.
Saameynada dhinaca CBD
CBD waa badeecad aad loo jecel yahay oo ay si aad ah u isticmaalaan dhalinyarada qaangaarka ah iyo shaqsiyaadka da'da dhexe. In kasta oo ay run tahay in budada cannabidiol ay leedahay dhowr faa'iidooyin cilmi ahaan la xaqiijiyay oo la xiriira, haddana waxaa muhiim ah in la ogaado in faa'iidooyinkan, ay jiraan waxyeellooyin yar oo la xiriira isticmaalka CBD. Waxyeellooyinkaan waxaa la arkaa marka CBD afka laga qaato, ama afka. Cilmi -baaris ku filan lama samayn si loo ogaado waxyeellooyinka ka imaan kara foomamka dalabka ee kala duwan.
Waxyeellooyinka guud ee CBD waxaa ka mid ah:
Cadaadiska dhiigga oo hooseeya ama hypotension
Af qalalan ama Xerostomia
Inta badan waxyeellooyinkaan ma aha kuwo aad u daran waxayna xallin doonaan si iskood ah. Badeecadaha CBD waxaa loo isticmaali karaa ilaa 13 toddobaad si isdaba joog ah, oo leh qiyaas badbaado leh oo ah 200mg maalintii, Epidiolex wuxuu la xiriiraa dhaawaca beerka ee daran haddii lagu qaato qaddar sare maadaama daawada loo oggolaaday in loo isticmaalo qadar ka sarreeya 200mg maalintii , inkastoo ay tahay dhif iyo naadir.
Isdhexgalka suurtagalka ah iyo Taxadarka Gaarka ah ee CBD
CBD guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa inay si wanaagsan u dulqaadanayso inta badan kooxaha qaangaarka iyo kuwa qaangaarka ah waxayna xitaa awoodaan inay soo saaraan faa'iidooyin la taaban karo ee dadkan. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la xuso inay jiraan taxaddarro gaar ah oo loo baahan yahay in loo qaado dadka qaarkood oo laga yaabo inay xiiseynayaan qaadashada CBD. Taxaddarradan waxaa loogu talagalay dadka qaba cudurka beerka ama cudurka Parkinson. Shuruudahan ayaa wax ka beddelaya waxtarka badeecadaha CBD iyo daryeel gaar ah waa inay qaadaan bukaannadan haddii ay doortaan inay qaataan CBD.
Bukaannada qaba cudurka beerka ayaa weli qaadan kara CBD si kastaba ha ahaatee, waxaa looga baahan doonaa inay qaataan qiyaaso hoose oo CBD ah, marka loo eego qofka caadiga ah maadaama beerka uusan awoodin inuu dheef -shiid kiimikaad ku sameeyo awooddiisa caadiga ah. Cilmi -baaristu waxay muujineysaa in heerarka hoose ee CBD aysan saameyn ama cadaadis ku saarin beerka jirran, taasoo la micno ah in bukaannadan ay si ammaan ah u qaadan karaan alaabta CBD.
Bukaannada qaba cudurka Parkinson waxay leeyihiin astaamaha lagu garto gariirrada nasashada iyo dhaqdhaqaaqyada muruqa oo aan habboonayn. Astaamahaan ayaa la rumeysan yahay in lagu buunbuuniyay isticmaalka waxyaabaha CBD, taas oo ah sababta bukaanka Parkinson looga baahan yahay in ay ka fogaadaan isticmaalka mid ka mid ah alaabtaan.
Badeecadaha CBD sidoo kale laguma talinayo carruurta, in kasta oo aysan caddayn saamaynta ay ku yeelan karto kooxdan da'da ah. Epidiolex, daawada loo isticmaalo maareynta iyo daaweynta qalalka, ayaa si joogto ah loogu qoraa carruurta la ildaran xanuunnada qalalka. Sida laga soo xigtay FDA, dawadu waa badbaado in loo isticmaalo carruurta laakiin lama garanayo inay tahay mid kale waxyaabaha CBD badbaado ama waxtar u leh carruurta. Ilaa baaritaan dheeri ah la sameeyo, waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado in carruurta la siiyo alaabta CBD marka laga reebo Epidiolex.
Haweenka uurka leh iyo dumarka naaska nuujinaya ayaa sidoo kale laga codsanayaa inay taxaddar sameeyaan oo ay ka fogaadaan isticmaalka alaabada CBD. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha mid si gaar ah ay ugu wacan tahay saamaynta CBD, oo aan weli la garanayn, laakiin waxaa sabab u ah suurtagalnimada in alaabooyinkan ay ku sumoobaan sun ama walxo waxyeello leh oo laga yaabo inay waxyeello u geystaan ​​haweeneyda ama ilmaha sii kordhaya. Maaddaama aysan suurtogal ahayn in qof walba xaqiijiyo amniga badeecadaha ay adeegsadaan, waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado badeecadaha CBD guud ahaan muddadaas.
Marka laga reebo taxaddarrada gaarka ah ee aan kor ku soo xusnay, waxba lagama yaqaan wax ku saabsan is -dhexgalka daroogada ee CBD.
Waa maxay Foomamka alaabada CBD ee lagu soo saaray AASraw?
AASraw waa il lagu kalsoon yahay oo ka samaysan budada steroid, hormoonnada jinsiga, iyo dawooyinka caqliga leh. AASraw sidoo kale waa soo-saare iyo soo-saare CBD gooni u ah, oo soo saarta tayo sare leh, aamin ah in la isticmaalo, iyo alaabada CBD ee hufan. CBD waa badeecad isku -dhafan oo laga heli karo qaabab kala duwan laakiin ma aha soo -saareyaasha oo dhan soosaara oo soo saara dhammaan noocyada kala duwan ee CBD. Warshadda CBD waxaa laga yaabaa inay soo saarto noocyo kala duwan oo badeecado ah, mana aha foomamka oo dhan inay awoodaan inay xoogga saaraan tayada iyo badbaadada alaabta.
AASraw waa soo saare budada CBD ah sidoo kale waa soo saarta Saliidaha CBD, oo labaduba aad loo jecel yahay aadna loogu baahan yahay. Alaabooyinka ay soo saartay AASraw waxaa ka mid ah:
CBD Powder ama concentrate waa nooc ka mid ah cannabidiol oo si weyn loo soo saaray oo lagu iibiyo dadka badankood oo isku dayaya iibso budada CBD maadaama ay fududahay in la isticmaalo oo hufan soo saarista natiijooyinka. AASraw waxay leedahay nooc gaar ah oo ah budada CBD oo diyaar u ah iibinta, taas oo lagu farsameeyo warshad halkaas oo tilmaamaha amniga iyo qawaaniinta la raaco si sax ah. Tani waxay xaqiijineysaa badbaadada iyo hufnaanta alaabada, taas oo AASraw, soo -saaraha budada CBD iyo bixiyaha budada CBD, dammaanad qaadayo oo isku faanto.
Soo -saaraha budada CBD wuxuu kaloo hubiyaa in alaabtu aysan ku sumoobin wax sun ah ama walxo waxyeello leh inta lagu gudajiro wax soo saarka ama baakadaha warshadda CBD. Waxaa intaa dheer, AASraw waxay leedahay xakameyn tayo leh oo la socon karo taas oo dhacdooyinka dhifka ah ee arrimaha tayada, waxay gacan ka geysataa raadinta iyo dib u soo celinta dhammaan alaabooyinka lagu soo saaray dufcaddaas.
Budada CBD ee ay soo saartay AASraw waxaa loogu yeeraa CBD Powder-biyo-dhalaalaysa waxayna u caddahay budada cad-cad oo ka kooban 10 boqolkiiba CBD. Badeecadani waa ka madaxbannaan tahay THC boqolkiiba 90 kale ee budada ah waxay ka kooban tahay qaybaha dawooyinka iyo xidhmooyin ka caawiya inay buunbuuniyaan saamaynta faa'iidada leh ee CBD waxayna u oggolaanaysaa alaabtu inay wada joogsato oo ay sii jirto muddo dheer.
Budada CBD-biyo-milmaysa ayaa loo malaynayaa in lagu qaso biyo si loo soo saaro xalka aqueous marka loo baahdo in la qaado. Xalka aqueous wuxuu u baahan yahay in si fiican loo qaso oo loo ruxo, taas oo xalka ka dhigi karta xumbo. Taasi waa qaab -dhismeedka caadiga ah ee badeecada waana sida loo qaadanayo.
Waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in budada CBD ay tahay in si habboon loo kaydiyo, oo ka fog iftiinka qorraxda. Waxaa intaa dheer, marna waa in boodhku la kulmaan aashito ama saldhig maadaama laga yaabo inay falceliso budada.
Saliidaha CBD, sidaan kor ku soo sheegnay, waa qaabab awood leh oo CBD ah maadaama ay ku jiraan uruurin badan CBD marka la barbar dhigo qaababka kale. Saliidaha CBD ee AASraw dhammaantood waxaa lagu farsameeyaa Dhaqanka Waxsoosaarka Wanaagsan ama xarun GMP la xaqiijiyay, oo dammaanad qaadeysa awoodda iyo waxtarka saliidaha CBD. Dhammaan saliidaha CBD iyo badeecadaha kale ee ay soo saarto AASraw waxaa loo soo saaray si loo hubiyo inaysan wax wasakh ah ku jirin badeecadooda iyo inay sida ugu badan isugu urursan yihiin.
Waxaa jira laba nooc oo kala duwan oo saliidaha CBD ah oo ay soo saartay AASraw, sida hoos ku xusan:
· Hemp Saliid Muhiim ah
Saliidaha hemp ee CBD ayaa caan ku ah mahadnaqa faa'iidooyinka badan ee alaabtan, sida kor ku xusan. Saliidaha gaar ahaan waxay caan ka yihiin qaababka kale ee alaabada CBD maxaa yeelay waxay ka kooban yihiin xoogaa sare oo CBD ah.
Hemp Saliid Muhiim ah by AASraw waa saliid cad, madow, iyo huruud ah oo aad u urursan oo deggan. Waa in lagu kaydiyaa heerkulka qolka oo ka fog iftiinka qorraxda si loo hubiyo faa'iidooyinka ugu sarreeya iyo cimriga dheer ee alaabta. Badeecaddan oo ay samaysay warshadda CBD ee AASraw waa dhinac saddexaad oo la tijaabiyey oo laga heli karo ururo kala duwan, oo leh CBD ama cannabinoids spectrum caajis ah.
Badeecadani waa xalaal, Kosher, gabi ahaanba waa ka xor THC laakiin waxaa ka buuxa cannabinoids aan nafsiyan lahayn ee geedka hemp.
· Saliida Dhirta Dahabka ah
Saliidda Dahabka ah ee AASraw waa dhinac saddexaad oo la tijaabiyay, saliid cannabinoid tayo sare leh oo hodan ku ah cannabinoids-ka buuxa. Midabkan huruudda ah ilaa saliidda madow-madow-madow-madow waxaa lagu iibiyaa baakado kala duwan, waxaana suurtagal ah in tan si toos ah looga iibsado warshadda CBD ee AASraw gaar ahaan haddii xoog-saaris sare oo CBD ah looga baahdo saliidda.
Badeecadu waxay la timaadaa talooyin gaar ah oo ku saabsan kaydinta maadaama kaydinta aan habboonayn ay ka dhigi karto badeecadda mid aan waxtar lahayn. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in cannabinoids -ka ku jira badeecadani ay kristaali karaan waqti ka dib. Tani micnaheedu ma aha in badeecadu aysan ahayn mid la isticmaali karo laakiin taa bedelkeeda kaliya kuleylka saliidda adoo ku ridaya qubeys biyo diirran ayaa kala diri doona kiristaalada, taasoo u oggolaaneysa in saliidda loo isticmaalo sidii hore.
Sida loo doorto soo -saaraha saxda ah ee alaabta CBD?
Dhowr soo-saareyaasha budada CBD waxay dammaanad qaadayaan in alaabadooda ay ku jiraan CBD tayo sare leh laakiin taasi inta badan waa run. Waxaa muhiim ah in laga iibsado budada CBD iibiyayaal la xaqiijiyay oo raacaya tilmaamaha amniga oo leh isbaarooyin tayo leh oo habboon si loo hubiyo badbaadada, waxtarka, iyo awoodda sheyga.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa muhiim ah in laga iibsado budada CBD soo -saareyaasha bixiya alaabada aan tijaabin oo keliya soo -saaraha budada CBD iyo alaab -qeybiyaha laftiisa laakiin sidoo kale dhinacyo saddexaad oo sii hubiya tayada badeecada ugu dambeysa isla markiiba ka hor inta aan loo dirin suuqyada adeegsadaan macaamiisha kala duwan. Haddii badeecadu ku guuldareysato imtixaankan shaybaarka ee dhinac saddexaad, waa inay u xanaaqdaa soo-saaraha kaasoo markaa qiimeynaya sababta badeecadu ugu fashilantay hubinta tayada oo ay tahay inay xalliso arrimahaas ka hor inta aan la soo saarin badeecooyin cusub oo aan la keenin.
Gaar ahaan marka aad iibsanayso jumlada CBD ama aad dhigayso amarada waaweyn ee budada CBD, waxaa muhiim ah in si qoto dheer loo baaro badeecada iyo soo -saaraha si looga fogaado wax kasta oo la xiriira badeecada ugu dambeysa ee laga heli karo siyaado. Haddii faa'iidooyinka ugu badan ee CBD loo baahan yahay, baaritaan kale oo ku saabsan soo -saaraha ayaa loo baahan yahay in la sameeyo si loo hubiyo in badeecada hal iibsi ay hodan ku tahay xaddi badan oo CBD ah, iyo CBD oo keliya. Badeecadu waa inaysan ku jirin THC ama cannabinoids kale oo yareynaya saameynta CBD ama ka horjoogsata inay ku shaqeyso awooddeeda buuxda.
 Lucas CJ, Galettis P, Schneider J (Nofeembar 2018). "Farmasokokinetics-ka iyo farmasiga firfircoonida ee cannabinoids". Joornaalka Ingiriiska ee Daaweynta Daawada Daawada. 84 (11): 2477–2482. doi: 10.1111 / bcp.13710. PMC 6177698. PMID 30001569.
 Zhang M. "Maya, CBD 'Sharci Kama Aha Dhamaan 50ka Gobol' '. Forbes. Dib loo soo celiyey Noofambar 27, 2018.
 Klein C, Karanges E, Spiro A, Wong A, Spencer J, Huynh T, et al. (Nofeembar 2011). "Cannabidiol wuxuu awood u leeyahay Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) saameynta habdhaqanka wuxuuna badalayaa daawooyinka daawada ee THC inta lagu jiro daweynta ba'an iyo daba dheeraatay ee jiirka qaangaarka ah". Cilmu-nafsiga. 218 (2): 443–57. doi: 10.1007 / s00213-011-2342-0. PMID 21667074. S2CID 6240926.
 Adams R, Hunt M, Clark JH (1940). "Qaabdhismeedka cannabidiol, oo ah shey laga soocay marihuana laga soo saaray hemp duurjoogta ah ee Minnesota". Wargeyska Bulshada Kiimikada Mareykanka. 62 (1): 196–200. doi: 10.1021 / ja01858a058. ISSN 0002-7863.
 Gaoni Y, Mechoulam R (1966). "Hashish-VII Isomerization-ka cannabidiol ee tetrahydrocannabinols". Tetrahedron. 22 (4): 1481–1488. doi: 10.1016 / S0040-4020 (01) 99446-3
 Abernethy A, Schiller L (Luulyo 17, 2019). "FDA waxaa ka go'an inay ka dhawaajiso, Sayniska ku saleysan Sayniska ee CBD". Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA). Dib loo soo celiyey Oktoobar 17, 2019.
 Gunn L, Haigh L (Janaayo 29, 2019). "Hay'ad Ingiriis ah ayaa u aragta CBD inay tahay cunno cusub, waxay dooneysaa inay yareyso iibka suuqa UK". Fahanka nafaqada, CNS Media BV. Laga soo aruuriyay asalka Febraayo 2, 2019. Dib loo soo helay Janaayo 1, 2019.
 Arnold M (Luulyo 30, 2019). "Sweden waxay kubiirtay talyaaniga dariiqa lagu qeexayo Shuruucda Shidaalka ee CBD". Joornaalka Warshadaha Cannabis. Dib loo soo celiyey Sebtember 3, 2020.
 "Cannabinoids, ayaa laga baaray buugga cuntada ee EU Novel (v.1.1)". Guddiga Yurub. Janaayo 1, 2019. Dib loo soo ceshay Febraayo 1, 2019.
 Todorova S. "Canab ku soo koraya Bulgaria: Waa sharci laakiin wali waa la ceebeeyay". Lexology. Waxaa dib loo helay September 3, 2020.
 Waaxda Dawlada Australia ee Maamulka Agabka Daaweynta Caafimaadka (Abriil 24, 2020). "La-tashiga: Wax ka beddelka la soo jeediyey ee Heerka Sunta - Kulammada wadajirka ah ee ACMS / ACCS, Juun 2020". Maamulka Alaabta Daaweynta (TGA). Raadin Nofeembar 25, 2020.
 "Waraaqaha Digniinta iyo Natiijooyinka Tijaabada ee alaabooyinka la xiriira Cannabidiol". Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA). Nofeembar 2, 2017. Dib loo soo ceshay Janawari 2, 2018.
 Kogan L, Hellyer P, Downing R (2020). "Hemp Oil Extract si loogu daaweeyo Canine Osteoarthritis-ka Xanuunka La Xiriira: Daraasad Duuliye". Joornaalka Ururka Dhakhaatiirta Caafimaadka Xoolaha ee Holistic American. 58: 35–45.